About Us - Linyi Yongsheng Umhlaba Imp & Exp Co., Ltd.
Linyi Yongsheng emhlabeni ukungenisa & ukuthekelisa Co., Ltd. kuyinto yokukhiqiza kanye nokuhweba inkampani professional futhi ezikhethekile ocwaningweni, design, ukukhiqiza kanye yokuthengisa ekhaya nemikhiqizo yokuhlanza.
Sadlula ISO: 9001, CE futhi isitifiketi OHSAS. Emakethe yethu eyinhloko Europe, i-Ningizimu Melika, empumalanga Ephakathi, eNingizimu-mpumalanga Asia, e-Afrika nakwamanye amazwe kanye izifunda. Imikhiqizo yethu akhishwe zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-40 emhlabeni wonke futhi ithole idumela elihle phakathi amakhasimende ethu angaphandle.
Izwe Yongsheng njalo ukunamathela ifilosofi: "ukuhlinzeka izimpahla ezibalulekile amakhasimende, ukudala esikhathini eside namathuba amabhizinisi amabhizinisi" ngenhloso inkonzo "sesiqiniseka, ukuthula kwengqondo nokubambisana ujabule."
Sizimisele ukwakha brand yethu "LUMENG". Sine uchungechunge ekhishini yokugezela nemikhiqizo yokuhlanza, kuhlanganise ekhishini yokuhlanza sponge, engagqwali scourer, engagqwali wire, scourer lashukumisa, isipanji metal, scouring pad, i-polyester fibre scourer, umlingo melamine sponge, ukuwasha indwangu isidlo, fibre indwangu, Semi-siphelile imikhiqizo, umshini scourer, igilavu, okugeza eshaweni, okugeza ithawula nokunye.
Siyakwamukela sifinyelele amaphupho akho futhi ayinqobe esizayo kanye Yongsheng Umhlaba!
Scourer Sponge, Pvc Coated Wire Machine, Wire Coated Hanger Machine, Kitchen Scrubber Pad, Engagqwali Scourer, Wash Dish Sponge Machine,